NYI LYNN SECK 18+ DEN: 2nd Phase Relief Aids
2nd Phase Relief Aids
အိမ်ရိုက်သံ (၃ လက်မ)
အိမ်ရိုက်သံ (၄ လက်မ)
ဒါတွေက ကျွန်တှောတို့ Handy Myanmar Youths အဖွဲ့လေးက ဒုတိယအကြိမ် လှူဒါန်းဖို့ရာ ပို့ခဲ့တဲ့ ပစဿစည်းတွေပါ။ တန်ဖိုးအားဖြင့် ကျပ်ငွေ ခြောက်ဆယ့်ခုနစ်သိန်းခန့် ရှိပါတယ်။ အသေးစိတ် စာရင်းကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။[Link] ဒီဒုတိယအကြိမ်အတွက် Myanmar PSA Family, Singapore ကလှူဒါန်းတဲ့ ငွေကျပ် ခုနှစ်ဆယ့်ခြောက်သိန်း နှစ်သောင်းကို အဓိက ရံပုံငွေအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ပိုလျှံတဲ့ ငွေကို အခြားသင့်တှောတဲ့ နေရာများမှာ ထည့်သွင်းလှူဒါန်းပေး သွားပါမယ်။ အလှူဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း အမြန်ဆုံး တင်ပေးနိုင်အောင် ကျွန်တှောတို့ ကြိုးစားပါမယ်။
Posted by NLS at 5/27/2008 05:08:00 PM
No response to “2nd Phase Relief Aids”
Budget Hat's Model
Dont Use Victims!!
Budget Hut Plan
Transportation to Laputta
Donation at Laputta
Documents for on going process
အသက်ရှင် ကျန်နေခဲ့တာ ကံကောင်းခြင်းလား ကံဆိုးခြင်းလ...
Another Cyclone can attack Myanmar soon!!
Rescue Plan 1
Nargis Donar List
Well, thanks to everyone for contributing in this ...
Latest News From Delta Area
Nargis' Follow up News
Help Aids for Nargis' Victims